Ogaden News Agency (ONA) – Wasiiirka Arimaha Dibadda ee Qatar oo Washington kula kulmay Tillerson
Wasiiirka Arimaha Dibadda ee Qatar oo Washington kula kulmay Tillerson
Posted by Wariye Qaran	/ June 28, 2017
Wasiirka wasaaradda arimaha dibadda dalka Qatar ayaa magaalada Washington kula kulmay dhiggiisa dalkaasi Mareeykanka, kadib markii waaxda arimaha dibadda Mareeykanka ay sheegtay in ay ka walaacsantahay xiisadaha ka dhex aloosan dalalka Khaliijka.
Kulanka uu Sheekh Max’ed Bin C/raxmaan Al-Taani laqaatay xoghayaha arimaha dibadda Mareeykanka Rex Tillerson ayaa imanaya maalmo yar kadib markii xukuumadda Qatar ay heshay warqad uga timid dalalka Baxrayn, Masar, Sacuudiga iyo isu tagga Imaaraadka, taas oo ay kusoo bandhigeen qodobo ay shuruud uga dhigeen wadahadallo ay la galaan Qatar.
Shuruudaha ka kooban 13-ka qodob ee ay dalalkaasi ku xidheen Qatar ayay sheegeen in fulintooda ay horseedi doonto in la soo afjaro xanibaadda dhanka siyaasada iyo ganacsiga ee mudada sedexda todobaad ah saaran dalkaasi.
Wareeysi uu tv-ga France 24 qeybtiisa carabiga la yeeshay Wasiirka Arimaha Dibadda ee Qatar ayuu sheegay dowladda Qatar ay had iyo jeer u hogaansantahay shuruucda caalamiga ah ayna door muhiim ah ka cayaartay dagaalka caalamiga ah ee lagula jiro kooxda la magac baxday dowladda Islaamka ee dalalka Iraaq iyo kooxaha kale ee argagixisada ah.
Afar dal oo carbeed ayaa sheegay horaantii bishan in ay xidhiidhka u jareen dowladda Qatar, ayagoo ku eedeeyay in ay taageerto kooxo xagjir ah, wallow Qatar ay arintaasi beenisay. Tillerson ayaa ku baaqay in xal siyaasadeed laga gaadho xiisadahaasi, isagoo xusay in Mareeykanku kaalin ka qaadan doono sidii xal loogu heli lahaa xiisadaha u dhexeeya dalalka Carbeed.
Dalka Qatar ayaa martigeliyay saldhigga ugu weyn ee Mareeykanku ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe, waxaana labadaasi dal ka dhexeeya xidhiidh wanaagsan oo dhinacyo badan taabanaya.